सत्तासँगको असन्तुष्टि ‘सिष्टम’प्रति नहोस् भन्नेतर्फ कांग्रेस सजग छ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / सत्तासँगको असन्तुष्टि ‘सिष्टम’प्रति नहोस् भन्नेतर्फ कांग्रेस सजग छ
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता January 23, 2019	0 184 Views
नेपाली कांग्रेस दाङका पूर्वसचिव
दुईतिहाईको सरकार छ अहिले, प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै बलियो छ। तर जति बलियो सरकारको काममाथि प्रश्न उठाइएको छ त्यति प्रतिपक्ष कांग्रेसको कमजोर भूमिकाको पनि टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। पछिल्ला दिनमा पाच नम्बर प्रदेशको राजधानीका विषयमा बुटवलमा कांग्रेसले प्रदर्शन नै ग¥यो। तर दाङ कागे्रस बोलेन भन्ने चौतर्फी कुरा पनि उठेका छन्। प्रतिपक्षको भूमिका, स्थायी राजधानीका विषयमा दाङ कांग्रेसको धारणा र भर्खरै स्थापना गरिएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र यसको सेवा र कर्मचारी आन्दोलनका विषयमा युगबोधकर्मी जे.एन.सागरले कमलकिशोर घिमिरेसग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहा प्रस्तुत गरिएको छ। –सम्पादक
प्रदेश राजधानीका विषयमा रुपन्देही कांग्रेसले प्रदर्शन ग¥यो यहाहरु त बोल्नु भएन नि ?
दाङ राजधानी नहुनुको कारण म अलिकति पृष्ठभूमितर्फ जान्छु। निर्वाचनपूर्व कांग्रेसको सरकार थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। निर्वाचनमा दाङ कांग्रेसले हा¥यो। त्यसैले एउटा नेतृत्वलाई दाङलाई कांग्रेस नचाहिएको हो भने भनेर मनोवैज्ञानिक असर शेरबहादुरजीलाई परेको हो कि। अर्को कुरा दाङमा सबै कांग्रेसले हार्ने बुटवलमा केही ठाउ“मा कांग्रेसले जित्ने अवस्थाले पनि केही काम गरेको हो जस्तो मलाई लागेको छ। यसरी हेर्दा यो नेतृत्वमा परेको मनोवैज्ञानिक असर पनि हो ।
राजनीति पनि हो र अलिकति रणनीति पनि हो। त्यो देखियो राजधानी तोक्ने विषयमा नेतृत्वलाई। जे भए पनि राजधानीको विषयमा निर्णय गर्दा भावनात्मक निर्णय ग¥यो, विवेकपूर्ण निर्णय गरेन। कांग्रेसलाई हराएर दाङ राजधानी ल्याउन सकिदैन भन्ने कुरा हामीले पनि बुझाउन सकेनौं। अहिले अस्थायी राजधानी तोकिसकेको अवस्था छ। अहिले बुटवलमा कांग्रेसले सार्नुह“ुदैन भनेर खबरदारी सभा गरेको छ। जसरी म दाङको कांग्रेसको हिसावले मैले दाङ राजधानी बनाउने चाहना अद्यापि उत्तिकै छ, त्यसैगरी त्यहा“को कांग्रेसलाई हुनु स्वाभाविक हो। जुन सभामा नेताहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्नथ्यो भन्ने कुरा हो त्यसका विषयमा बहस चलिरहेको छ।
यताबाट पनि बोल्द्या भए के बिग्रिन्थ्यो त ?
बोल्दै नबोलेको होइन। मिडियामा, सामाजिक सञ्जालहरुमा कांग्रेसका नेताहरुले विचार राखिरहनु भएको छ। म पनि बोलेकै छु। राज्यसत्तामा दाङको पहु“च छैन भन्ने हो भने मुख्यमन्त्री शंकरजी र संघीय सभामुख महराजी हुनुहुन्छ। बरु कांग्रेसको पहु“च छैन अहिले। दाङको सम्भावनाको विषयमा राज्य नै संवेदनशील भएन कि भन्ने मेरो बुझाइ छ। हामी दबाब मात्रै दिनसक्छौं। निर्णय गर्ने ठाउ“मा बस्नेहरुले भन्नुप¥यो समस्या के हो ? यदि सा“च्चिकै दाङ राजधानी बनाउने हो भने मुख्यमन्त्रीले दाङमा गोलमेच सम्मेलन गर्नुस्। हामी पनि त्यहींभित्रबाट एक भएर लागौं। अप्ठेरो के हो भन्नुस्।
यही कुरो पार्टीले भन्न सक्या भए हुन्थ्यो कि ?
कांग्रेसभित्र बसेर छलफल गरेको अवस्था छैन। तर एकप्रकारको दबाब सबैसम्म पुगेको छ र मानसिकरुपले सबै नेताहरु तयार हुनुहुन्छ। तपाइ“लाई थाहा छ कांग्रेसकै सरकारले बुटवल अस्थायी राजधानी तोक्दा दाङ कांग्रेस आन्दोलनमा आएकै हो। अहिले पनि छ।
पायक पर्ने ठाउ‘मा नभए हामी छ नम्बरमा जान्छांै भन्दैछन् बाके र बर्दिया दाङमा आरापार किन ?
दङाली भएका कारणले दाङ भनिएको होइन भन्ने कुराको प्रमाण हो बा“के, बर्दियाको आवाज। सबै हिसावले दाङ उचित छ भन्ने कुरा हो। यो काम गर्न राजनीतिमा कहिलेकाहीं बाहिर एउटा भित्र अर्को कुरा पनि हुन्छ। त्यसो हो भने मुख्यमन्त्रीले अप्ठेरा, सप्ठेराका विषयमा कम्तिमा दाङवासीलाई जानकारी दिए कसरी लाग्ने भन्ने विषयमा हामीले सकेको गर्ने थियौं।
चुनाव हारेर पार्टी कमजोर भएको हो कि कांग्रेस अस्तव्यस्त हुनुको कारण कि अरु नै केही हो ?
कांग्रेसको एउटा कार्यकर्ताको हिसावले मैले के देख्छु भने परिवर्तन कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ । परिवर्तनपछिको निर्वाचनको नतिजा कांग्रेसको विपक्षमा आएको छ। जनताबाट यस्तो खालको निर्णय आउनुमा कहीं न कही समस्या छ। त्यो समस्याको पहिचान गरेर समयमै जनतामाझ पुग्न सकिएन कि भन्ने हो। अर्को कुरा निर्वाचनमा अस्वाभाविक परिणाम आएपछि त्यसको असर कांग्रेसमा प¥यो। तर पछिल्लो चरणमा महासमिति बैठक सम्पन्न भयो। त्यतिबेलै कांग्रेस ठूलो विघटनको संघारमा छ जस्तो अवस्था थियो त। कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुलाई पनि लागेको थियो। तर महासमिति बैठक पश्चात पार्टी एउटा स्थितिमा आइपुगेको छ। संघीयताका केही संरचनालाई पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि स्वीकार्ने काम गरेको छ र नया परिस्थितिमा नयँ“ संरचनागतरुपमा अघि बढ्ने कुरालाई कांग्रेसले स्वीकार गरेको छ। अब सोही अनुसारको संरचनागत विस्तारको काम तल्लो तहमा पनि हुन्छ। यसले अब आउने चुनौतीको सामना गरेर पनि अघि बढ्न तयार भएको छ।
खै त पार्टी र भातृ संस्थाहरुका संगठन, कमिटी पुरानै छन् ?
केन्द्रीय समिति र महासमितिले जुन म्यान्डेट दिएको छ। यसलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनतर्फ सबै लाग्नुपर्छ। कांग्रेस मात्रै होइन, विभिन्न सबै संरचना र गतिविधिको शैली हेर्दा जनताले यो व्यवस्था हाम्रो हो कि होइन भन्न थालेका छन्। संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बेलामा यदि यो परिवर्तनलाई संस्थागत नगर्ने र व्यवस्था नै असफल हुने हो भने परिवर्तनको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले कांग्रेसले पनि ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ। यदि यो परिवर्तनलाई संस्थागत नगर्ने हो भने हामी आधुनिक राजनीति गर्नेहरुको भविष्य छैन। नेविसंघको अधिवेशन भइरहेका छन्। पालिकास्तरका भइसकेका छन। जिल्लाको पनि छिट्टै हुन्छ। यही तरिकाले पार्टीका पनि हुन्छन्। कांग्रेसले संघीयतालाई मनबाट स्वीकारेको छ। त्यसैले पनि छिट्टै हुन्छ। तीन महिनाभित्र संरचनाहरुको निर्माण हुन्छन्।
सरकारी बेथिति रोक्न छाया“ सरकार बनाउने भनेजस्तै हो कि नया संरचनामा जाने पनि ?
कांग्रेस जिम्मेवार पार्टी हो। त्यति नै संवेदनशील पनि छ। कहिलेकाहीं एउटा प्रयोजनका लागि तय गरिएको मुभमेन्ट अर्को प्रयोजनमा कन्भर्ट हुनसक्छ। खतरा पनि हुन्छ। असन्तुष्टिहरु फरक तरिकाले प्रकट हुनसक्छन्। कांग्रेसले सत्तास“गको असन्तुष्टि प्रयोग गरिरहेको बेलामा सम्पूर्ण सिष्टमका प्रति असन्तुष्टि मिसिएर गयो भने के गर्नुहुन्छ ? कसले रोक्न सक्छ त्यो बेलाको परिस्थिति। त्यसको अर्थ फेरि त्यति कमजोर भएर त्यो काम नगरेको भने होइन। मुख्य कुरा कांग्रेस पर्ख र हेरको नीतिमा छ। र, आफ्नो संरचना निर्माणको चरणमा पनि उत्तिकै लागेको छ। सरकारले पनि आफ्नो औचित्यता बुझोस् भन्ने हो। दुईतिहाइको बलियो सरकार छ। बैधानिक सरकार छ।
दाङ कांग्रेसले खुमबहादुरको जस्तो अभिभावकत्व पाउन सकेन भन्छन् हो ?
दाङ कांग्रेसको सभापति पदको प्रतिद्वन्द्वी मै हो। कीर्तिजीले सभापति जित्नुभो मैले हारें। मैले ४७ प्रतिशत भोट पाए । उहाले ५३ प्रतिशत पाउनुभयो। कीर्ति र म मा कुनै खालको विवाद छैन। यदि थिए भने अब कम हु“दैछन्। राजनीतिको कुरा गर्दा नेपालमा दाङ, मोरङ र झापाको बेग्लै महत्व छ कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा। झापामा सिके प्रसाईं, रामबाबु प्रसाईं नेता हुनुहुथ्यो। सिके, रामबाबु र सिटौलाका बीचमा धेरै आशंकाहरु थिए। तर झापाले सिकेको बारेमा पनि सोच्यो सिटौलाको बारेमा पनि सोच्यो। मोरङमा कोइरालाहरुको ठाउ“ हो त्यो। कोइरालाहरु हुदाहुदै अरुले पनि स्थापित हुने ठाउ“ पाए। कोइरालाहरुको नेतृत्व हुदाहुदै मीनेन्द्र रिजाल आउनुभयो। मीनेन्द्र हुदाहुदै अमृत अर्याल, डिगबहादुर लिम्बुहरु पनि आउनु भएको छ। तर दाङको दुर्भाग्य। कांग्रेसमा भरतमणि, गणेशकुमारजी र परशुनारायणजीले दाङ कांग्रेसको नेतृत्व गर्नेबेलामा खुमबहादुर, बलदेव, चैतु, कृष्णकिशोर थाहा थिएन। यही थियो दाङको दुर्भाग्य। जुन कुरा झापामा भयो सिके, रामबाबु हुदा सिटौलाको उदय भयो, त्यसैगरी सिटौला र विश्वप्रकाशकोबीचमा विवाद हुने बेलामा सिटौलाको पनि उदय भएको छ । विश्वप्रकाशको पनि उदय भएको छ। त्यही कुरा दाङमा पनि होस भन्ने चाहना हाम्रो हो। म चाहन्छु नेपालको परिवर्तन गर्ने नेतृत्वकै कार्यकालमा नया“ नेतृत्व स्थापित होस् भन्ने हो। तर त्यो भइरहेको छैन। त्यो किन भएको छैन भन्ने कुरा केही कमजोरी हाम्रा पनि होलान्। केही कमजोरी तत्कालीन अवस्थामा भएकाले त्यसको मनोवैज्ञानिक असर पनि होला। यसमा दाङ सचेत हुनुपर्छ। एउटाको अवसानमा मात्रै नया“ नेतृत्व निर्माण हुने हो भने नया नेतृत्वले गर्न सक्ने जुन सम्भावना हुन्छ नि त्यो धेरै कम हुन्छ। त्यसकारणले नेतृत्व रह“दै अर्को नेतृत्व निर्माण गर्दै जाने काम गर्नुपर्छ। मेरो आग्रह छ सबैसग मेरो पार्टीभित्र र समग्र दाङमा पनि। अहिले चैतु, बलदेव, कृष्णकिशोरहरु हुनुहुन्छ उहा“हरु हुदै नया“ नेतृत्व तयार गर्नुपर्छ। यसले दाङ बन्छ। कांग्रेस पनि बन्छ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या अब कसरी समाधान गर्ने ?
मेडिकल कलेजको आवश्यकता छ यहा“ भनेर कांग्रेसको तर्फबाट पहिलो हस्ताक्षर गर्ने मान्छे हु“ म। हामीले जुन परिकल्पना गरेर यसको निर्माणमा लाग्यौं। त्यसले एउटा आकार लिएको छ। तर एउटा चिज के देखिन्छ भने यसको निर्माण चरणबाटै सत्ताले यसलाई सरल तरिकाले लिएको देखिएन। प्रतिपक्ष भएर भनेको होइन। अहिलेको सरकार यसप्रति धेरै पोजेटिभ नभएको देखिन्छ। के कारणले हो थाहा छैन। यो नै समस्याको रुपमा आएको छ। यदि सा“च्चिकै धेरै ठूलो गोलका लागि काम गरिरहेका छांै भने सानातिना कुरामा नअल्झिउ“ भन्ने मेरो सुझाव छ। हस्पिटलमा गयो डाक्टरहरु बाहिर बस्या छन्। कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन, तालाबन्दी हुन्छ। रणभूमिजस्तो छ अस्पताल। यसले प्रतिष्ठानको भविष्य राम्रो देखाउ“दैन। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुसंग मेरो आग्रह छ तपाइ“हरुको जे दायित्व हो त्यही मात्रै गरेर अघि बढ्नुस्। त्यसमा सहकार्य के गर्नुपर्ने हो हामी गर्न तयार छौं।
Previous: घोराहीमा कांग्रेस भेला, पराजयले नवीन कांग्रेस बन्ने अवसर :प्रवक्ता
Next: राजस्व सार्वजनिक गर्न नागरिक समाजको ज्ञापनपत्र